US VP Kamala Harris kuNASA pane Urgent Climate Work
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » US VP Kamala Harris kuNASA pane Urgent Climate Work
Kurumidziro yeSainzi yePasi nezvidzidzo zvemamiriro ekunze kwatora nzvimbo nhasi, Chishanu seMutevedzeri weMutungamiriri Kamala Harris akashanyira NASA's Goddard Space Flight Center muGreenbelt, Maryland. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika akagamuchira tarisiro yekuona kuti chirongwa chenyika chepasi chinodzidza sei shanduko yemamiriro ekunze uye inopa ruzivo rwakakosha kuti tinzwisise shanduko yepasi redu uye maitiro adzo pahupenyu hwedu.
Munguva yekushanya, NASA Administrator Bill Nelson akafumura mifananidzo yekutanga kubva kuLandsat 9, basa rakabatana reNASA uye US Geological Survey (USGS) yakatangwa mukupera kwaGunyana. Mifananidzo iyi inoratidza Detroit neLake St. Clair yakavakidzana nayo, iri kuchinja Florida coastline, uye nzvimbo dzeNavajo Country muArizona. Vanozowedzera kune hupfumi hwe data kutibatsira kutarisa hutano hwezvirimwa uye mvura inoshandiswa kudiridza, kubata zviwanikwa zvakakosha, uye kuona mabatiro ekushanduka kwemamiriro ekunze.
Mifananidzo mitsva, yose yakawanikwa Oct. 31, inopawo ruzivo pamusoro pekushanduka kwenzvimbo dzeHimalaya neAustralia, kuwedzera kune Landsat isingaenzaniswi yedata rekodhi iyo inotora makore anoda kusvika makumi mashanu ekuona kwepasi.
"Ini ndinotenda zvechokwadi chiitiko chemuchadenga chiitiko chemamiriro ekunze. Basa remuchadenga idzidzo. Basa remuchadenga zvakare kukura kwehupfumi. Iyo zvakare innovation uye kurudziro. Uye zvine chekuita nekuchengetedzeka kwedu nesimba redu, "mutevedzeri wemutungamiri wenyika akadaro. “Kana zvasvika kune yedu basa remuchadenga, pane mukana usingaperi. ... Saka, sezvatinoenda kubva pano, ngatirambei tichitora mukana wemuchadenga.
Harris naNelson vakakurukurawo chiziviso cheNASA cheNyika itsva Venture Mission-3 (EVM-3). Investigation yeConvective Updrafts (INCUS) ichadzidza kuti madutu emunzvimbo dzinopisa uye mabhanan'ana anokura sei uye anowedzera sei, izvo zvichabatsira kuvandudza mamiriro ekunze uye mamiriro ekunze.
"Nyanzvi dzedu dzeNASA nhasi dzakatipa tarisiro yenzira dzakawanda dzatinoda kuti tinzwisise zviri nani pasi redu, kubva pakusanaya kwemvura nekupisa kwemaguta, kumakungwa edu nenzvimbo zhinji dzatinoona dzichichinja kubva kumatenga," akadaro Nelson. "Biden-Harris Administration yakazvipira kufambira mberi padambudziko remamiriro ekunze kubatsira chizvarwa chinotevera, uye NASA iri pamwoyo webasa iri."
NASA, pamwe neNational Oceanic uye Atmospheric Administration (NOAA) uye USGS, iri pakati pemasangano emubatanidzwa anoita tsvakiridzo yemamiriro ekunze uye anopa data yemamiriro ekunze yakakosha kumasangano nemasangano pasi rese. Mamiriro ekunze akanyanya uye zviitiko zvemamiriro ekunze - kusanganisira kusanaya kwemvura, mafashama, uye moto wesango - zviri kuramba zvichiitika. Maonero anobva muchadenga anotibatsira kudzidza pasi redu sehurongwa hwakabatana kuti tinzwisise zviitiko izvi uye tibatsire vanhu kwavanogara.
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika akasangana nemasainzi nemainjiniya kuti vakurukure kuti NASA yakakura sei portfolio yeEarth sainzi misheni inobatsira kugadzirisa matambudziko emamiriro ekunze akatarisana nenyika yedu.
Basa reNASA rakasiyana-siyana reSainzi yePasi rinosanganisira masetelliti anoshanda mukubatana nemamwe masangano. Izvi zvinosanganisira NOAA neUSGS, yaivewo nevamiriri kuti vasangane naHarris.
"Iye zvino mumakore gumi echitanhatu, mubatanidzwa weNOAA-NASA unoisa tekinoroji yepamusoro pasi rose muchadenga kuvandudza kugona kwenyika kuona nekufanotaura mamiriro ekunze nemamiriro ekunze ePasi," akadaro NOAA Administrator Rick Spinrad, Ph.D. "Mapoka eNOAA nenyanzvi dzeNASA dziri kuNASA Goddard dziri kusimudzira nyika yedu inotevera-geostationary satellite, inonzi GOES-R, iyo inoburitsa data rakakosha rekufanotaura kwakaringana uye kwakakodzera nguva kunoponesa hupenyu uye kubatsira vanhu kujairana nekushanduka kwemamiriro ekunze."
"Mifananidzo inomanikidza yeLandsat 9 uye neruzivo rwesainzi zvichabatsira zvemukati kutonga zvirinani nyika nezviwanikwa zverudzi rwedu, kuchengetedza nhaka yetsika, kukudza mabasa edu ekuvimba nemaNative America nevanhu veko, uye kugadzirisa dambudziko remamiriro ekunze," akadaro Tanya Trujillo, Dhipatimendi. weMutevedzeri wemunyori weInterior wemvura nesainzi. "Zuva rega rega, makore anoda kusvika makumi mashanu eLandsat data archive inochengetedzwa uye yakagovaniswa zvakasununguka neUSGS iri kupa ruzivo rutsva nerutsigiro rwesarudzo kuvakuru vehurumende, vadzidzisi nemabhizinesi kuti vanzwisise zviri nani uye vagadzirise mamiriro edu ari kuchinja."
Munguva yekushanya kwake, Harris akashandisa robhoti ruoko rwuchiyedzerwa remangwana mu-orbit rekuwedzera refueling basa reLandsat 7 satellite. Iyo satellite parizvino iri kudzidza Earth sechikamu chezvikepe zveLandsat.
Harris akashanyirawo Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem (PACE) mishoni, inosanganisira chiridzwa chiri kuvakwa kuGoddard chekutanga 2022. PACE ichasimudzira hunyanzvi hwekuongorora hutano hwegungwa nekuyera kugoverwa kwephytoplankton - zvidyarwa zvidiki uye algae zvinotsigira dandemutande rekudya remugungwa. Chirongwa cheGOES-R, chine GOES-T satellite yakarongerwa kuvhurwa kweNOAA muna Kukadzi 2022 kuvandudza mamiriro ekunze, yakaratidzwawo.